Isniin, Nov 30, 2020-Maxamuud Siyad Aadan;” Ma gudbin doonno gudiyada doorashada ilaa laga fulinayo heshiisyadii hore – LaacibOnline
Isniin, Nov 30, 2020-Maxamuud Siyad Aadan;” Ma gudbin doonno gudiyada doorashada ilaa laga fulinayo heshiisyadii hore
Maxamuud Siyad Aadan;” Ma gudbin doonno gudiyada doorashada ilaa laga fulinayo heshiisyadii hore
Isniin, November, 30, 2020 (HOL) – Madaxweyne ku-xigeenka Dowlad Gobolleedka Jubbaland Maxamuud Siyad Aadan ayaa sheegay in aysan gudbin doonin gudiyada doorashada ee laga sugayo inta laga fulinayo ayuu yiri heshiisyadii iyo balanqadyadii ay horey u sameysay dowladda dhexe ee Federaalka.
”Annaga waxeynu rabnaa in marka hore gobolka gacanteena lagu soo celiyo, dowladdu iyada ayaa ka baxday heshiiskii horey aynu galnay, mas’uuliyada arintanna iyada ayaa qaadeysa ayuu yiri” Maxamuud Siyad Aadan.
Ma’aha gobolka Gedo oo kaliya sidoo kale Maxamuud Siyad Aadan ayaa sheegay in dowladda federaalka si guud ugu tumaneyso sharciyadii lagu heshiiyay ee doorashada oo ay aheyd in laga qeybgalo dhinacyada ay quseyso oo idil, sida siyaasiyiinta mucaaradka, isaga oo si gaar ah u soo qaatay xadgudub uu sheegay in lagu sameeyay guddiyada doorashada gobollada Waqooyi..
← Somalia: Al-Shabaab Attacks Military Base in Southern Somalia
Dhageyso barnaamijka cayaaraha todobaadka →
Axad, Jun 21, 2020-Faahfaahin ku saabsan qaraxyo lagu weeraray ciidamo katirsan dowladda oo ka kala dhacay gobolada Mudug iyo Shabeeladda hoose
Khamiis, Sept 17, 2020-Xildhibaan Ka Tirsan Baarlamaanka Hirshabelle oo caawa lagu dilay magaalada Jowhar
Isniin, Nov 16, 2020-Cabdiraxmaan Cabdishakuur” Doorasho aynaan raali ka noqon Muqdisho laguma qaban karo